စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 5:18 PM |0comments
အမုန်းတရားတွေကို ဖန်တီးခဲ့လေသလား ♥ချစ်သူ♥
ကြင်နာမှု့လေးတွေ ပေးပါတော့လား ♥ချစ်သူ♥
နေဝင်သည်အထိ စောင့်မျှော်ပါရစေလား ♥ချစ်သူရယ်♥♥♥
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 12:24 PM |0comments
ရက်၊ လ ရှည်ကြာ နေခဲ့သူ သူ့ဝမ်းမှာ
ရှုမချမ်းသာ ဒုက္ခအဖြာဖြာကို ရင်စီးခံကာ
ချဉ်၊ ငံ၊ ပူ၊ စပ် စသည် အစာကို လျှောင်ကြင်လျှက်
ငါ့အား စာနာထောက်ထားခဲ့တဲ့ အမေ…။
သူ့ဝမ်းတွင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူ ငါ့အတွက်
ပြောင်းလည်း ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အမေ…။
ဟိုဒီညွှန်ပြ စီစဉ်ဖြောင်းဖျပေးခဲ့တဲ့ အဖေ…။
ပီတိကိုစား အားရှိနေခဲ့တဲ့ အမေနဲ့အဖေ…။
နှစ်တွေ အလီလီပြောင်းခဲ့သော်လည်း၊ အမေနဲ့အဖေရဲ့ နွေးထွေးမှုအရိပ်ရဲ့အောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ သမီးအတွက် သမီးဘ၀တစ်သက် ဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတဲ့ သမီးရဲ့မွေးနေ့လေးနဲ့ထပ်တူ အမေနဲ့အဖေကို ဂါရ၀ပြုနေမှာပါ…။
သမီးအပျော်ရွှင်ဆုံးနေ့ဖြစ်သလို၊ သမီးရဲ့အမေနဲ့အဖေ၊ သမီးရဲ့ မိသားစုနွယ်၊ သမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းများနှင့် သမီးနဲ့ ဆက်နွယ်ခဲ့သူများအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းအတိနဲ့ အရာရာပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ သမီးဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 12:15 AM |0comments
ဘဝမှာ အမှတ်ရစရာ နေ့စွဲလေးတွေက အများသား... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကို မွေးမေမေက လူလောကထဲကို မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး... လူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံခွင့်မရပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ မွေးမေမေနဲ့ ကျွေးဖေဖေကို ဒီကနေပြီး လက်အုပ်ချီပြီး ရှိခိုးပါတယ်ရှင်... ကျွန်မကို လမ်းမှန်လျှောက်တတ်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ မိဘကျေးဇူးကို ဆပ်လို့မကုန်ပဲ မဟုတ်လား... အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာလေ ကိုယ့်မိဘကျေးဇူးကို ပိုသိလာလေလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်... အဲဒီအတွက်လဲ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်သိပြီး သားသမီးတာဝန် ကျေပွန်ဖို့ကလဲ ကျွန်မတို့လူငယ်တွေရဲ့ ဝတ္တရားတစ်ခုပဲလေ... ကျွန်မကို မေမေက လူ့လောကထဲကို ခေါ်လာခဲ့တာ ဒီနေ့ဆို နှစ်ဆယ်ရှစ်နှစ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ... ကျွန်မဘဝ တစ်လျှောက်မှာ မိဘစကားကို ဦးထိပ်ပန်ခဲ့တဲ့အတွက် (တစ်ခုသော အကြောင်းအရာက လွဲလို့... ဟီးးး) ဒီနေ့ဆိုတဲ့ အချိန်တစ်ခုမှာတော့ ကျွန်မမိဘက ကျွန်မရဲ့ အောင်မြင်မှု့ပန်းတိုင်တွေကို ဂုဏ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ မွှေးနေ့လေးကို ကျွန်မခင်တဲ့ အွန်လိုင်းကသူငယ်ချင်းများ၊ ဘလော့ဂါမမတွေ၊ ဘလော့ဂါကိုကိုတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်... လေးနှစ်မှာမှ တစ်ကြိမ် ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ရက် မွေးနေ့လ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ကျွန်မအတွက် ထူးခြားမှု့လေးတွေ နဲ့တိုက်ဆိုင်မှု့ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ် တွေကိုတော့ စက်တင်ဘာ (၁၇)ရက်နေ့ထဲက ရုံးမှာပဲ မလေးရှားအစားအစာ ကက်ကြေးကိုက်ရယ် pineapple ထမင်းကြော် နဲ့မွေးနေ့ အလျှူဒါနလုပ်ခဲ့တယ်... အရင်တုန်းကတော့ ကြာဇံချက် ချက်ကျွေးမလို့ပါပဲ... အကြောင်းကြောင်းနဲ့ အဆင်မပြေမှု့တွေကြောင့် မလေးရှားဆိုင်ကပဲ အားပေးလိုက်ပါတယ်... ဟီးးးးးး.... အဲဒီပုံတွေ တင်ထားပေးတယ်နော်... အားရပါးရစားပါ...း)... (၁၈)ရက်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ငွေပဒေဿပင်သီးခဲ့တယ်... (၁၉)ရက်နေ့မှာတော့ မနက်အစောကြီးမှာ ဘုရားကို သစ်သီးကိုးမျိုးနဲ့ ဆွမ်းကပ်ဖို့ လုပ်ထားတယ်... ပြီးရင် ငါးပါးသီလခံယူမယ်... ဖေဖေနဲ့ မေ့မေ့ကို ဖုန်းဆက်မယ်... ကိုကြီးနဲ့ မောင်လေးဆီက မွေးနေ့လက်ဆောင် လှမ်းတောင်းမယ်... ဟီး... (အဲလို ချိုးနေကျ) ညနေပိုင်း ကျရင်တော့ အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်နဲ့ အပြင်မှာ hot pot သွားစားဖို့ ချိန်းထားပါတယ်... အဲဒီနေ့ကိုတော့ ဒိတ်လုပ်လို့ရဖူးနော်... အားဖူး....း)... ပြီးတော့ သူနဲ့လဲ ချိန်းထားတယ်... လုံးဝ လုံးဝ အားဖူး....း)
ဒါကမွေးနေ့ကိတ်လေး... အားရပါးရ အားပေးနော်... အားမနာနဲ့... အားနာလို့ကတော့ ဘာမှကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး...း)
ဒါလေးက pineapple ထမင်းကြော်....
ဒါလေးက မလေးရှားစတိုင် ကက်ကြေးကိုက်... စားလို့ကောင်းတယ်... ကျွန်မအနှစ်သက်ဆုံး အစားအစာတစ်ခုပေါ့...
ဒါက ဘာလီစေ့လေးတွေရယ် သံပုရာသီးစိတ်လေးနဲ့ ဖျော်ထားတဲ့ ဘာလီရည်တဲ့... (စလုံးမှာ နာမည်ကြီးတယ်လို့ ပြောတာပဲ... တိတိကျကျတော့ သိဖူးနော်...)
အချိုတည်းရအောင်... အသီးအနှံလေးလဲ အားပေးပေါ့...း) သွားပိုးစားကုန်မှာ ဆိုးလို့ပါနော်...
ဒါလေးက mochi ice-cream အလုံးလေးတွေ...
ဒါက သစ်သီးဖျော်ရည်... မမတွေအတွက် အထူးအော်ဒါ...
ဘလော့ဂါကိုကိုတွေအတွက်... ကြိုက်တာသောက်... မူးရင် တာဝန်မယူဘူးနော်...း)
ပြီးတော့ ကျွန်မရဲ့ ကွန့်မန့်ဘောက်စ်က ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲ အဲရာတတ်နေတော့ ဒီကနေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်... (အဲဒါတွေက သူတို့ကို အတင်းအကျပ် ဓမြတိုက်ထားရတာ... ဟီးးး)
ကျွန်မအတွက် အရေးကြီးဆုံးသူတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်...
"လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အချိန်သည်
မိမိကိုယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်သော အချိန်ဖြစ်လျှင်...
လူတစ်ယောက်အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံး နေ့ရက်သည်
မိမိအား မွေးဖွားလိုက်သော အချိန်ဖြစ်သည်...
အမြင့်မြတ်ဆုံး လူသားသည် အမေဆိုသော
စက်တင်ဘာရဲ့ ၁၉ ရက်
၂၈ ခါတိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ ....
အဖော် မရှာသေးတဲ့ အမ
ဒုက္ခ တွေကို အနိုင်ပိုင်း
ပျော်ရွှင်မှုတွေ ၀ိုင်းပါစေ ...
အမ မျှော်တဲ့ ဘ၀
အောင်မြင်မှုတွေ ထာဝရ ရနိုင်ပါစေဗျာ ....
စက်တင်ဘာလ (၁၉) ဟာ
ကန်ရာသီဖွား (သို့) Virgo
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 3:45 PM |0comments
ပို့စ်အသစ် တင်ချင်ပေမဲ့ ဘာရေးရမှန်းလဲမသိ ယောင်ခြောက်ဆယ် ဖြစ်နေတယ်လေ... ဘလော့ဒ်ထဲ လာလည်တဲ့သူတွေကတော့ နားတော့ ညီးနေမှာပဲ... မွေးနေ့တောင်းဆု သီချင်းတွေပဲ တင်ထားလို့...း)... အဲဒီတော့ ကျွန်မအတွေးထဲမှာ ပို့စ်တစ်ခုတင်ဖို့ အတွေးရောက်လာတယ်... ကိုယ်ကိုတိုင်ရော တော်သလင်းလမှာ မွေးတဲ့သူ သူငယ်ချင်းတွေလဲ တော်တော်များတာမို့... ကန်ရာသီဖွား (သို့) Virgo ဖွားတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ အချစ်ရေး၊ ကိုယ်နေဟန် ဆွဲဆောင်မှု့ တို့ကို ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းများကို ပြောပြမယ်နော်... ဒါမှ ကန်ရာသီဖွားတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေ ချစ်သူဖြစ်စေ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ရင်းနှီးမှု့ရှိမှာပေါ့...း)... အားပေးချင်လဲ အားပေး... အားမပေးချင်လဲ အားပေး... ဒါပဲ... (ဟီး... ရေးစရာ မရှိလို့... ရှိတဲ့ဟာ တင်တာ)
သြဂုတ်လ (၂၄) မှ စက်တင်ဘာ (၂၂) ရက်ကြားမွေးသောသူများ
ကန်ရာသီဖွားတို့၏ ရာသီရုပ်မှာ စပါးနှံများကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ကညာစင်တစ်ဦး၏ ပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်ပါတယ်...
ကန်ရာသီဖွားများသည် သီးသန့်နေလိုစိတ် ရှိတတ်ကြသည်... ခေါင်းမာသည်... စိတ်မြန်သည်... ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သည်... မှတ်ညဏ်ကောင်းသည်... ကိုယ်ပိုင်မှုနှင့် အရာရာကို လုပ်ကိုင်တတ်သည်... အကြံကြီးသည်... မည်သည့်အလုပ်ငန်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်စေ အချိန်တိုတိုအတွင်း စနစ်တကျ အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်တတ်သော သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်သည်... အပေါင်းအသင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းသောသူများ ဖြစ်သည်... ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ ပေါများသည်... ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာသည်... စာပေအတတ်ပညာအပေါ် တန်ဖိုးထားသည်... ခံစားချက်ကို မြိုသိပ်တတ်သူများ မဟုတ်... ပွင့်လင်းသော စိတ်သဘာဝရှိသည်... ချုပ်ခြယ်မှု့ကို မနှစ်သက်... စိတ်ပင်ပန်း၊ စိတ်ဆင်းရဲ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းဒဏ်ကို လုံးဝမခံနိုင်ပေ... စိတ်ရှုပ်ထွေးလာပါက ပြင်းထန်စွာ သူတစ်ပါးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘတ် ပြောတတ် လုပ်တတ်သည်... သူတပါးအပေါ် ယုံလွယ်သည်... သနားတတ်သည်... အနုပညာပါရမီ ထက်မြက်သည်... ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွယ်လုပ်ဆောင်သည့် ကိစ္စမှန်သမျှ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပ အများသူငှာ နှစ်လိုအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းသည်... တင့်တယ်ခြင်း၊ လှပခြင်း၊ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းခြင်း အပေါ်ရင်ထှဲာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားတတ်ပြီး ထိရောက်စွာ ဖော်ပြဆောင်ရွက် နိုင်စွမ်း ရှိသောသူများ ဖြစ်သည်... အရာရာအပေါ် ကောင်းသောဘတ်မှ ရှုမြင်သုံးသပ် တတ်သည်... စိတ်ရှည်သည်... သည်းခံစိတ် ရှိသည်... တစ်ပါးသူ၏ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ကူညီ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်သည်... စိတ်နာကျည်း ထိခိုက်လွယ်သည်... အညိုးကြီးသည်... သူတပါး ဝေဖန်အကြံပြု၍ အမှားပြုပြင်ရသည်ကို မလိုလား.... မိမိအမှားကို ရှာဖွေပြုပြင်တတ်သည်... အသေးစိတ် လေ့လာသုံးသပ်၍ အသိတရားနှင့် ယှဉ်ကာ ထိထိမိမိလုပ်ကိုင်တတ်သည်... လက်တွေ့နဲ့ စိတ်ကူးမျှတသည်... စဉ်းစားချင့်ချိန် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း ရှိသောသူများဖြစ်သည်...
သူလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် နားလည်အောင် မမြဲကြိုးစားနေလေ့ရှိသည်... သို့သော် သူတို့အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်သော ချစ်သူရရှိရန် အလွန်ခက်သည်... အများအမြင်တွင် အေးတိအေးစက်နှင့် အချစ်မရှိသောသူ မချစ်တတ်သောသူများဟု တွေးထင်ရလင့်ကစား လက်တွေ့တွင် သူတို့လောက် ချစ်တတ်သူများ မရှိပေ... အခြားသော အကြောင်းရာများကို ရွန်းရွန်းဝေအောင် ပြောတတ်သလောက် မိမိရင်တွင်းအချစ်ကိုကား ဖွင့်ဟပြောဆိုတတ်ခြင်းမရှိ... ပကတိ ရိုးရှင်းသော အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်... ပေးဆပ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ အချစ်ကို တန်ဖိုးထားခြင်း ရှိပေသည်... ချင့်ချိန်မှု့ လွန်ကဲခြင်းနှင့် မျှော်မြင်မှု့များလွန်း၍ ဤရာသီဖွားအားလုံးသည် အချစ်စစ်နှင့် ကင်းကွာတတ်သော သဘာဝလည်းရှိသည်... မိမိအပေါ် အလေးထားခြင်း၊ ဦးစားပေးခြင်း အပေါ် အလွန်နှစ်သက်သည်... သူတို့အပေါ်တွင် စိုးမိုးခြင်း၊ အနိုင်ယူခြင်းကို လုံးဝမနှစ်သက်ပေ...
ကန်ရာသီဖွားအားလုံးတို့သည် ပင်ကိုဟန်ပန်နှင့် ကိုယ်နေဟန် အချိုးအဆစ် အလွန် တင့်တယ်သည်... ကျော့ရှင်းသော အသွင်ရှိသည် (အဲဒါဗေဒင်ဆရာပြောတာနော်... ဟီးးး)... မိမိမျက်နှာသွင်ပြင်၏ မျက်ခုံး မျက်လုံး တွင်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်ခမ်းတွင်ဖြစ်စေ အချိုးကျ လှပမှု့များရှိသည်... ဖြူစင်သော သဏ္ဌာန်ပေါ်လွင်သည် (အဲဒါတော့မှန်၏... မေမေပြောတာနော် နော့ကို)... ပါးလွှာနူးညံသော အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်သည်... ကျာ၊မ မရွေး ရုပ်ချောသည်ဖြစ်စေ ရုပ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေ သန့်ပြန့်သော အသွင်ဆောင်သည်... ကံကောင်းသော ကန်ရာသီဖွားများတွင် မူလဆံပင်တွင် လှိုင်းတွန့်များနှင့် သွားစွယ် သွားတတ်များ ပါရှိတတ်သည်... ကန်ရာသီဖွားတို့သည် ရူပကာနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ခြေလက်အင်္ဂါမှန်သမျှသည် အရွယ်နှင့်မမျှ ပျိုမြစ်နုနယ်ခြင်း ရှိသည်... အသက်ကြီးလာငြား ရုပ်တင်ပြီး ငယ်ရွယ်နုပျို ရုပ်ပျိုကိုယ်နု၍ အသက်မှန်ကို အကဲခတ်ရန် ခက်ခဲလှသောသူများဟု ကျမ်းဂန်အချို့တွင် ဆိုသည်... ထူးခြားသည်မှာ သူတစ်ပါးအား ညို့ယူစွမ်းဆောင်နိုင်သော မျက်ဝန်းများပိုင်ဆိုင်သည်...
(ကဲ... ကိုကိုတို့ မမတို့ မောင်မောင်တို့ ညလေးတို့ရေ ကိုယ့်ချစ်သူက ကန်ရာသီဖွားဖြစ်နေရင် ကံကောင်ခြင်းတွေကိုလဲ ရနိုင်သလို ကံဆိုးခြင်းတွေကိုလဲ ရနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုနော်... ဒီဗေဒင်အဟောကို စံဇာဏီဘိုထုတ်ဝေသော ကန်ရာသီဖွားများအတွက်ဟောကိန်းမှ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါသည်...)
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 5:39 PM |0comments
လမင်းကြီးက ကြယ်ရောင်စုံတွေ ခြံရံပြီး နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်ရံမှာ တင့်တယ်နေလေရဲ့... လရောင်ရဲ့ အလင်းတချို့က ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ လင်းတဝက် မှောင်တဝက်နဲ့ပေါ့... ညအချိန် (၈)နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ရန်ကုန်-ပြည် ကားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ပြိုင်ကားခဲရောင်လေးတစ်စင်း အရှိန်ပြင်းစွာ ရန်ကုန်ဘတ်သို့ မောင်းနှင်လာနေသည်...
တုန်လှုပ်စွာနဲ့ ရင်ထဲမှာ အခါခါ ငိုရှိုက်ရင်း ညီးတွားနေမိတယ်... မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ အမြင်တွေက တစ်စတစ်စ မှုန်ဝေသီလာခဲ့တယ်... ဖုန်းထဲကနေ ရှင်းပြနေတဲ့ မောင့်အသံကိုကျွန်မ ဂရုစိုက် နားထောင်မနေနိုင်တော့ပဲ ဖုန်းကိုချပစ်ပြီး... ညတွင်းချင်းပဲ မောင်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်စီသို့ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ကားမောင်းပြီး ဆင်းလာခဲ့မိသည်... ကျွန်မစိတ်တွေကို မနည်းတည်ငြိမ်အောင် စုစည်းပြီး ကားမောင်းနေသည်... ရင်ထဲမှာတော့ အရမိးစိတ်တွေလှုပ်ရှားရင်း မခံချင်စိတ်တွေရော နာကျင်တာတွေရော မုန်းတီးတာတွေရော အားလုံးစုပြုံနေလေရဲ့... ဘဝမှာ လိမ်ညာမှု့ကို အမျိုးမျိုး ခံခဲ့ဖူးပေမဲ့... ဒီလိုမျိုး ချစ်တဲ့သူရဲ့ လိမ်ညာမှု့ ရက်စက်မှု့ကိုတော့ တစ်ခါမှ မခံစားခဲ့ဖူးဘူး... ဘဝမှာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံစွာ ခံစားနေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မအဖို့ ချစ်သူရဲ့ ရက်စက်မှု့ဆိုတာ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နာရီအထိပေါ့...
ကျွန်မရဲ့ရှုပ်ရှပ်ခက်နေတဲ့ စိတ်တွေကြောင့် ကားမောင်းနေတဲ့ အသိတရားတွေက ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်နဲ့... အခုချိန်မှာ ကျွန်မခေါင်းထဲမှာ ရှိတာ မောင့်အကြောင်းတွေကြီးပဲလေ... ကတိတွေ အထပ်ထပ်ပေးပြီးမှ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေကို ကျွန်မမောင့်အပေါ် ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်... အချိန်တော်တော်ကြာ သည်အထိ မောင်လိမ်ခဲ့တာကို ကျွန်မမယုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်... မောင့်ပြောနေကြ မောင့်ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်မနဲ့ တစုံတယောက်ကို လဲလှယ်ရဲတဲ့ မောင့်သတ္တိကို ကျွန်မအံသြမိတယ်... ကျွန်မအဲဒီအကြောင်းတွေကို ပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်း မျက်ရည်တွေ တားစီးမရအောင် ကျဆင်းလာလေသည်... မောင်တောင်ကျွန်မအပေါ် မငဲ့ညှာပဲ ရက်စက်တတ်ခဲ့တာ ကျွန်မကဘာလို့ မနေနိုင်ရမှာလဲ... ကျွန်မမာနတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ... ပြန်တွေးမိလိုက်တိုင်း သူ့အပေါ်ဒေါသတွေ ပိုပိုထွက်လာတယ်... မာနတရား ပေါ်ပေါက်လာတယ်... ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ ဘာလို့မောင်ဒီလိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာကို ကျွန်မနားမလည်အောင်လဲ ဖြစ်မိတယ်... ကျွန်မမောင့်အပေါ်မှာ ထားခဲ့တဲ့ လေးစားမှု့တွေ ယုံကြည်မှု့တွေက တစ်စစီကြေမွကုန်ပြီလေ... မောင်ရယ် ကျွန်မဘာတွေများ အပြစ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလို ရက်စက်ရတာလဲ... ကျွန်မဘယ်လောက်ထိ ခံစားနေရမလဲဆိုတာ မောင်မသိတာလား... မောင်မသိချင် ယောင်ဆောင်နေတာလား... မောင်သိသိကြီးနဲ့ လုပ်ရက်တာလား... တွေးရင်းနဲ့ အသက်ရှုကျပ်လာသည်... ကားပြတင်းပေါက်မှန်ကို လှမ်းဖွင့်ဖို့ ညာဘတ် လက်ချောင်းလေး တွေက အော်တိုခလုတ်လေးကို နှိပ်လိုက်သည်... ခေါင်းလေးကိုငဲ့၍ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ပြင်ပလေကို တစ်ဝကြီး ရင်ထဲသို့ ရှုပစ်လိုက်ပြီး အရှေ့ဘတ်သို့ ပြန်အလှည့်တွင် မျက်ရည်တွေနဲ့ ဝိုးတဝါးဖြစ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းထဲကို လက်ခနဲ မီးရောင်တစ်ခု မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အမှောင်တရားက အသိစိတ်ကို စိုးမိုးသွားလေသည်... တပြိုင်နက်ထဲ လူတစ်ကိုယ်လုံး တိမ်တွေလို လေဟာနယ်ထဲကို ညိမ့်ညိမ့်ညောင်းညောင်း ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်... ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါလိမ့်... လူတစ်ကိုယ်လုံး ဝါဂွမ်းတစ်ခုလိုပဲ ပေါ့ပါးနေလေသည်... အချိန်တော်တော်ကြာသည်အထိ လူတစ်ကိုယ်လုံး လေထဲလွင့်နေသလို ခံစားရတဲ့အချိန်မှာ ဖြတ်ခနဲ့ အသိစိတ်တစ်ခု ဝင်လာခဲ့တယ်... ကျွန်မမောင့်နံဘေးမှာ ရောက်နေပါလား...
ကျွန်မခေါ်လိုက်ပေမဲ့ မောင်ကမကြားသလိုနဲ့ TVကို ထိုင်ကြည့်နေသည်... ကျွန်မမောင့်နံဘေးကနေ အရူးမလေး တစ်ယောက်လို တတွတ်တွတ်နဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို ရန်တွေ့နေမိသည်...
"မောင်... ဘာလို့ပြန်မဖြေတာလဲ... ရှင့်ဆီမှာ ကျွန်မအတွက် ဖြေစရာအဖြေမရှိတော့ဘူးလား... ကျွန်မမေးတာကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ"... ဘာမှပြန်ပြောသံမကြား...
ကျွန်မဒေါသတကြီးနဲ့ မောင့်ကိုအော်ပစ်ပြီး သူ့လက်မောင်းကို လှမ်းရိုက်လိုက်သည်... လက်က လေထဲမှာတင် ဝဲပျံသွားသည်... ကျွန်မထိတ်လန့်စွာနဲ့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီး သူ့လက်မောင်းကို ကိုင်ကြည့်တယ်... ဘယ်လိုမှ ကိုင်လို့မရ... ကျွန်မအရမ်းထိတ်လန့်သွားမိတယ်... ကျွန်မ ဘာဖြစ်နေပါလိမ့်... ကျွန်မအသိစိတ်တွေက အမှောင်တွေ မစိုးမိုးခင် မီးရောင်ကို ဖြတ်ခနဲတွေ့လိုက်မိတဲ့ အဖြစ်ကို ပြန်သတိရမိသွားတယ်... ဘုရားရေ ကျွန်မဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ မောင့်နံဘေးကို ရောက်နေပါလား... မောင်ရေ... ကျွန်မတို့ တကယ်ကိုအဝေးဆုံးကို ဝေးကြရပြီပေါ့နော်... ကျွန်မအချိန် တော်တော်ကြာသည်အထိ မောင့်မျက်နှာကို တစ်ဝကြီး ငေးစိုက်ကြည့်နေမိတော့သည်.. ကျွန်မမောင့်ကို စိတ်နာပေမယ့် ချစ်နေစဲပါ... ကျွန်မတကိုယ်လုံးကို မီးခိုးငွေ့တန်းတွေ ဝိုင်းရံလာသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်မကို ဆွဲခေါ်နေသလိုပါ တပြိုင်နက်ထဲ ခံစားနေရသည်... ကျွန်မ နှုတ်ဆတ်ခဲ့ပါတယ် မောင်ရယ်... ကျွန်မသွားရတော့မယ်... မောင်နားမှာ ကျွန်မဒီထက်မက နေခွင့်ရှိရင် နေချင်ပါသေးတယ်... ကျွန်မ မရှိတော့တဲ့ဘဝမှာ မောင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ပိုက်နိုင်မှာပါ... ကျွန်မ အသက်ကုန်ဆုံးသည်အထိ မောင့်ကိုချစ်နေလျှက်ပါမောင်... ကျွန်မတရွေ့ရွေ့နဲ့ မီးခိုးတန်းခေါ်ဆောင်ရာသို့ နောက်ပြန်ပါသွားသည့်အချိန်မှာ မောင်ပြတင်းပေါက်ကနေ ကောင်းကင်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး တီးတိုးရေရွတ် လိုက်တဲ့ အသံကိုနောက်ဆုံး ကြားလိုက်ရသည်...
"ဟင်... ကြယ်လေးတစ်လုံး ကြွေကြသွားပါလား..."
အုတ်ဂူဖြူဖြူလေး တစ်လုံးပေါ်တွင် အကြွေစောခဲ့တဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးတပွင့်ရဲ့ နာမည်ကို လှပစွာ ကဗည်းထိုးထားလေသည်...
P.S (ပထမဆုံးရေးသော ဆောင်းပါးပါ... ခံစားချက် တိုက်ဆိုင်မှု့ကြောင့် ရေးဖြစ်သွားတာပါ... အမှားပါရင်လဲ အားနာပါးနာနဲ့ ဖတ်ပေးကြပါရှင်... ပြီးရင် ဝေဖန်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်...)
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 4:30 PM |0comments
တီတီအိ(Dream)ကတော့ လုပ်ချလိုက်ရော့မယ်... Tag ထားတယ်ဆိုလို့ အပြေးအလွှား သွားကြည့်လိုက်တာ... စကတ်တောင် ကွဲသွားတယ် (အယ်... ချောတီး ... စကတ်က နဂိုထဲက အကွဲနဲ့ ဖြစ်နေတာကိုး အဟတ် ဟတ်)... တူက Tag ထားတာကို မဖြေရင် ချစ်ချစ်နဲ့ကွဲမယ်ချိုလို့... ချက်ချင်း ပြန်ဖြေလိုက်ရတယ်... ဟူး... ပြေးလွှားလိုက်ရတာ ခြေကုန်လက်ပန်း ကြသွားတယ်...း)... တူ့ကို အငြိမ့်အတွက် မိတ်ကပ်လှလှလေး လိမ်းပေးမယ် ဆိုပြီး လက်ထိုးတာတောင် ရဖူးတော် (လက်သီးမဟုတ်ပါ... ဟီး)... အခုတော့ ဆံထုံးလှလှလေး ထုံးပေးဖို့ပါ အဆစ်ပါတွားပီ... ဟိ ဟိ... ဂျစ်ဂျစ်ရေးနဲ့ ကွဲမှာချိုးရို့ ဖြိုးငယ်လိုတော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန် ထောင်းပြီး မရေးပြဘူးနော်... မသိမသာလေးပဲ တိုးတိုးလေးပြောပြမယ်... ဟီး.... ကြယ်စင်အကြောင်းတွေကို သိချင်ရင်... ဒီမှာရေးထားတယ်...း)
အားရဝမ်းသာစွာနဲ့ ဟန်တောင်မဆောင်ပဲ ပြောပြချင်လွန်းလို့ ပြောပြလိုက်တာနော်... ဟီးးးးးးးးး
ကိုယ့်ကိုသူငယ်ချင်းတွေကဒီလိုခေါ်တယ်............... မ၊ မမ၊ အစ်မ၊ မကြီး၊ မမကြယ်၊ မမိုး၊ မိုးရေအေး၊ ညီမ (စုံပလုံနေတာပဲ)
ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်................................... cell phone နဲ့လှမ်းဆက်လိုက်လေ
အဝတ်အစားဆိုရင်.......................................... free style လေးတွေ
အစားအစာဆိုရင်............................................ မုန့်ဟင်းခါး၊ ရခိုင်မုန့်တီ၊ ဝက်သားတုတ်ထိုး
စာရေးစရာ.................................................... ဂျူး၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ ဒေါက်တာမတင်ဝင်း (အစုံအစုံ... မှတ်ချက်... အသုပ်စုံမဟုတ်ပါ ဟီးးးးးး)
Life Style...................................................... ငြိမ်းချမ်းသာယာသောမိသားစုဘဝ
ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ................................................ စာဖတ်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက............................. ပြောလဲသိမှာမဟုတ်ပါဘူး (မသိမ့်)
ကိုယ့်ကိုအများဆုံးနားလည်မှု့ပေးနိုင်သူက................. ကိုကြီး (အစ်ကိုအရင်းဖြစ်ပါသည်... ဟိ ဟိ)
အမှတ်တရနေ့.................................................. ရက်ပေါင်း (၃၆၅) ရက်ထဲက တစ်ရက်ပေါ့
သံယောဇဉ်ဆိုတာ.............................................. မမြင်နိုင်တဲ့သေးငယ်ပါးလွှာတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်း (အပ်ချည်ကြိုးမဟုတ်ပါ... ဟိ ဟိ)
ဘဝဆိုတာ....................................................... ဘကုန်းနဲ့ ဝလုံးပေါင်းထားတာလေ
သူငယ်ချင်းဆိုတာ............................................... ဆိုးတူကောင်းဖတ်၊ အတင်းတုတ်ဖော်တုတ်ဖတ် (အဲ... ဟုတ်သေးပါဘူး... မွှားတွားတယ်... ဟိ ဟိ)
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်................................... ငါဒီနေ့တော်တော်ချောလာပါလား ဟိ ဟိ
ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲဆောင်ပုဒ်က................................. "do whatever u have to do, never turnaround"
အပြောချင်ဆုံးစကားလေးတစ်ခွန်း........................... အားလုံးကုန်ပြီ.. ဘာမှချိတော့ဘူး... ဘာသိချင်သေးတုန်း
ဒီလောက်ဆို ပရိသတ်ကြီးလဲ ကျေနပ်မယ်ထင်ပါရဲ့...း)
သူများ Tag သလိုအားကျမခံပြန် Tag လိုက်ဦးမယ်... (၇)ရက်အတွင်း မရေးပါက ချစ်သူနဲ့ အသေကွဲကွဲ အရှင်ကွဲကွဲ ကွဲချင်သလိုကွဲပါစေ... ဟိ ဟိ...
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 5:25 PM |0comments
ချစ်သူ ♥♥♥ မင်းကိုယ့်ကိုသတိရတဲ့အခါ
ချစ်သူ ♥♥♥ မင်းကိုယ့်အသံကြားချင်တဲ့အခါ
ချစ်သူ ♥♥♥ မင်းအတွက်ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့အနမ်းတွေကို
ချစ်သူ ♥♥♥ မင်းကိုယ့်ကိုမှာတမ်းခြွေချင်တဲ့အခါ
ချစ်သူ♥♥♥ဝေးကွာလှတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဖက်ခြမ်းစီမှာပဲ ရောက်နေပါစေ...
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 2:58 AM |
လျှောက်ခဲ့တဲ့ "လမ်း" ♥♥♥
နားလည်မှု့နဲ့ လျှောက်ခဲ့တဲ့ "လမ်း" ♥♥♥
လွမ်းဆွပ်စွာ လျှောက်ခဲ့တဲ့ "လမ်း" ♥♥♥
ပြန်ဆုံချိန်လေးမှာ ရွှန်းပြမျက်ဝန်းအကြည့်လေးတွေ ဆုံမိရင်း
အချစ်ချင်းဖလှယ်စွာ လျှောက်ခဲ့တဲ့ "လမ်း" ♥♥♥
အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ "လမ်း" ♥♥♥
ဒီ "လမ်း" လေးတွေရဲ့ တိုက်စားမှု့က
မင်းနဲ့ဒို့ရဲ့ သံယောဇဉ်အချစ်ရဲ့ သက်သေဟာလည်း
ဒီ "လမ်း" လေးပါပဲ ♥♥♥
အခုမင်းနဲ့ဒို့ရဲ့ တည်ရှိတဲ့ ဒီ "လမ်း" လေးကို ဗဟိုပြု
ရှေ့လျှောက် ဘဝတစ်သက်စာ ထာဝရချစ်သူများအဖြစ်သို့
မခွဲသောလက်များနဲ့ လျှောက်လှမ်းကြပါစို့နော် ♥♥♥
P.S* အမှတ်တရရက်စွဲလေးတစ်ခု... (August 18,2008)
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 12:28 PM |4comments
ဒီနေ့ ပို့စ်တင်ဖို့ လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ဘာမှလဲ ရေးစရာကမရှိတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မေးလ် forward လုပ်လာတဲ့ အီးမေးလ်ထဲက ပုံပြင်လေးတစ်ခုကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်... ဘယ်သူဘယ်ဝါ ရေးသားတယ်ဆိုတာ မသိရသောကြောင့် ရေးသားသူနာမည်ကို မဖော်ပြလိုက်ရပါ... Original forward အီးမေးလ်ထဲမှာ ပါတဲ့စကားလုံးလေးတွေက မှားတာကြောင့် ကျွန်မ စာဖတ်သူတို့ အဆင်ပြေအောင် အနည်းငယ်စာသားတွေကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်... အကယ်၍ ရေးသားသူ(နာမည်မသိ) ကသူ့စာသားတွေကို ပြင်ဆင်ရကောင်းလားလို့ အပြစ်တင်လာရင်တော့ ကျွန်မ၏စေတနာ အမှားသာဖြစ်ပါတယ်... ဒီပုံပြင်ဆောင်းပါးလေးမှာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ... ကျွန်မသူငယ်ချင်းပေးပို့လိုက်သော အီးမေးလ် forward မှရရှိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်... မိန်းမသားဘဝအတွက် သတိပြုစရာလေးများ ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မပို့စ်တင်ဖြစ်သွားတာပါ... မမှားသင့်တာ မမှားအောင် ကာကွယ်ရမှာက ကျွန်မတို့ရဲ့မိန်းမသားဘဝ မဟုတ်လား... ငယ်ရွယ်နုပျိုသော ညီမငယ်လေးတို့ သတိပြုမိအောင် ရည်ရွယ်၍ ဒီပို့စ်ကိုတင်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်....
" ရွာတစ်ရွာမှာပေါ့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရှိကြတယ်..... အရမ်းလဲချစ်ကြတော့ နီးစပ်ဖို့အရေး ကြိုးစားကြတာပေါ့... လုလင်ပျိုက လုံမလေးကို ခိုးပြေးဖို့ ချိန်းပါတယ်.... ညသန်းခေါင်ယံမှ လုံမလေးအိမ်ရှေ့က စံပယ်ရုံအကွယ်ကနေ ရွှေဂျိုးကူသံပြုရင် လုံမလေးက ထွက်လာဖို့ချိန်းတယ်... ချိန်းဆိုတဲ့ညမှာ လုံမလေးလဲ တကူ.... ကူး ... ကူ ဆိုတဲ့ အသံကြားတာနဲ့ အထုတ်ဆွဲထွက်လာခဲ့တယ်... နှစ်ယောက်သား တောထဲကို ထွက်ပြေးကြတာပေါ့... တော်တော်လေးလဲ ခရီးရောက်တော့ ဗိုက်ကဆာလာတာပေါ့... အဲဒီမှာဘဲ လုံမလေးပါလာတဲ့ ထမင်းထုပ်ကို နှစ်ယောက်ခွဲ စားမယ်လုပ်တယ်.... ထမင်းထုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ ပုဇွန်ထုပ်က တစ်ကောင်ပဲ ပါလာတယ်... အဲဒီတော့ လုလင်ပျိုက ပုဇွန်ထုပ်ကို ထမင်းပုံအလယ်မှာ ထောင်ထားမယ်... ထမင်းထုပ်ကို နှစ်ယောက်တူတူစားရင်း ပုဇွန်ထုပ်လဲသွားဘက်ကသူက ပုဇွန်ထုပ်ကို စားဖို့ ပြောတယ်... အဲလိုနဲ့ လုလင်လဲ ဆာဆာနဲ့စားလိုက်တာ ထောင်ထားတဲ့ ပုဇွန်ထုပ်က လုလင်ဘက်ကို လဲသွားတာပေါ့... အဲဒီတော့ လုလင်က ပုဇွန်ထုပ်ရဲ့ ခေါင်းပိုင်းကို စပြီးစားလိုက်တယ်.... လုံမလေးက တွေးမိတယ် သြော်... ခေါင်းပိုင်းမို့ ငါ့ကိုမကျွေးတာပါပေါ့.... နောက် လုလင်က အမြီးပိုင်းကို ကိုက်လိုက်တယ်... လုံမလေးလဲ တွေးပြန်တယ် သြော်.... အမြီးပိုင်းမို့ ငါကိုမကျွေးတာနေမှာပါပေါ့... နောက်ဆုံး လုလင်က
ပုဇွန်ထုပ်ကြီးရဲ့ အလယ်ပိုင်းကို စားလိုက်တယ်... အဲဒီတော့ လုံမလေးလဲ ပုဇွန်ထုပ်ကို နည်းနည်းမှ မစားလိုက်ရရှာဘူး.... ထမင်းလဲ စားပြီးရော လုလင်က ရေဆာတယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်.... အဲဒီမှာ လုံမလေးလဲ ရေရှာပြီး တိုက်ရပြန်တာရော.... ရေသောက်ပြီး လုလင်ပျိုလဲ မောမောနဲ့လဲအိပ်ပျော်သွားတာပေါ့.... အဲဒီအချိန်မှာဘဲ လုံမလေးလဲ ရွာဘက်ကို အပြေးပြန်လာပါတော့တယ်... နောက်နေ့မှာ လုလင်ပျိုလဲ ရွာပြန်ရောက်ပြီး သန်းခေါင်ယံအရောက်မှာ လုံမလေးအိမ်ရှေ့က စံပယ်ရုံနောက်ကွယ်ကနေ ရွှေဂျိုးကူသံ ထပ်ပေးပါတယ်..... အဲဒီအချိန်မှာတော့ လုံမလေးက ထွက်မလာတော့ပါဘူး.... အခန်းပြတင်းကနေပဲ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်...... "တော်ပါတော့မောင်ကြီးရယ် ပုဇွန်ထုပ်လဲ ကတည်းက စိတ်ဝမ်းကွဲလို့ ဝေးကြရပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့" တဲ့လေ...
မိန်းကလေးတွေ တစ်ဘ၀လုံးအတွက်ရည်ရွယ်ထားရင် အချစ်မှာ မျက်စိရှိဖို့လိုပါတယ်...အပေါ်ယံ အရေပြားက အလှတရားထက် ကိုယ်နဲ့ တစ်ဘ၀လုံး အေးအတူပူအမျှ စိတ်ထားနိုင်မယ့်သူကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်...
ချစ်သူ ♥♥♥ သိပါလေစ
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 3:38 AM |6comments
"ချစ်သူ ♥♥♥ သိပါစေ"
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 2:53 PM |4comments
စားမိသူ ••• ငါလေ
ချစ်မိသူ ••• ငါလေ
ရင်မှာအပြည့်ဖြစ်နေပြီလား ♥♥♥ ?
ဘယ်သူမြင်နိုင်မှာလဲ ♥♥♥ ?
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 11:58 AM |4comments
စာရေးသူ ကြယ်စင်နတ်သမီး | at 12:52 AM |5comments